काठमाडौँ । अहिले जिम्बावे जारी आसीसी विश्वकप क्रिकेट छनौटको प्ले अफ अन्तर्गत सातौँ स्थानका लागि आज नेपाल र पपुवा न्युगिनीबीच खेल भैरहेको छ ।
जिम्बावेको हरारेस्थित पुरानो हरारियन स्पोर्ट्स क्लबमा भैरहेको खेलमा नेपालले टस जित्दै पपुवा न्युगिनीलाई पहिले ब्याटिंग गर्न निम्तो दिएको हो। समाचार तयार पर्दा सम्म नेपालले पपुवा न्युगिनीको १ विकेट झारिसकेको छ। नेपालका लागि पहिलो विकेट सोमपाल कामीले लिएका हुन्। उनले न्युगिनीका ओपनर ब्याट्सम्यान तथा कप्तान अस्साद भालालाई १० रनमा आउट गराएका हुन्। भालाले जम्मा ७ बल मात्र खेले। अहिले पपुवा न्युगीनी सातौँ ओभरको खेल चलिरहँदा १ विकेट गुमाउदै १९ रन बनाएर खेलिरहेको छ। भाला नेपालका विरुद्ध निकै राम्रो ब्याटिंग गर्ने ब्याट्सम्यान हुन्। उनले नेपाल बिरुद्धको खेलमा सर्वाधिक ८५ रन हानेका छन्।
छनोट चरणका सबै खेल हरेको पपुवा न्युगिनी आज जितको खोजीमा रहेनछ भने नेपाल आफ्नो दास्रो जितको लागि अग्रसर हुनेछ। विश्वकप छनोट हुने सम्भावना गुमाई सकेको नेपालले एकदिवसीय मान्याता पाउने सम्भावना भने जिवितै रहेको छ । नेपालले आजको खेलमा कुनै पनि हालतमा जित्नु पर्ने हुन्छ । किनकी यदि नेपाल आज खेल हरेको अवस्थामा र हङकङले नेदरल्याण्डलाई जितेको अवस्थामा नेपालले एक दिवसीय किर्केटको मान्यता पाउने सम्भावन अन्त्य हुनेछ।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत ०१, २०७४१३:४६
पपुवा न्युगिनीको दास्रो विकेट पनि पतन: अर्का ओपनर ब्याट्सम्यान पनि आउट !
कडा सुरक्षाकाबीच पाकिस्तानमा पीएसएल खेल्दै सन्दीप ! खेल केहिमा शुरु हुने !
आर्सनल लगातार ११ औं खेलमा विजयी
सुपर ओभरमा विराटनगरले पोखरालाई हरायो !